Kusungulwa Uhlelo Lokulondoloza Indawo Zihlanzekile eTafara/Mabvuku
Uzulu weZimbabwe ukhuthazwa umkhuba wokwenyanya ingcekeza okufana lezibi, amukele indlela yokulondoloza ezinye izibi ukuze ziphinde zisesetshenziswe eye recycling, okungamlethela inzuzo ngemva kokuzithengisa izibi ezinjengamagabha loba amaplastic sezehlukanisiwe kanye lokulondoloza indawo ahlala kizo zihlale zihlanzekile.
Linkuthazo kahulumende iza ngesikhathi abenkampani elungisa isamende ye Lafarge Cement Zimbabwe, imanyene lozulu kanye lezinye inhlanganiso eziphatheke kwezokulondolozwa kwemvelo, bekubone kufanele ukusungula uhlelo lokusebenzelana lozulu weMabvuku/Tafara ukulondoloza izibi ngendlela etholisa inzuzo, eye “Sustainable Community Waste Management Initiative ”.
Loluhlelo oluphawulwe okusemthethweni ngoLwesithathu ngenye yendlela esetshenziswayo ukukhuthaza uzulu we Mabvuku/Tafara ukulondoloza indawo ahlala kizo zihlanzekile, okuzaphathisa ekulondolozeni impilo yakhe kanye lezizukulwane ezizayo.
Unkosikazi Sukoluhle Madamombe, yisakhamuzi se Mabvuku oze emkhosini wokuphawulwa kwaloluhlelo olwenzelwe endaweni yamavinkili ako Kamunhu emzini weMabvuku.
Unkosikazi Madamombe uthi uvumelana lalesicelo sika hulumende, sokuthi uzulu enze ihlandla lakhe, ekulondolozeni izibi sikhathi sonke, hatshi ukulindela ukwenzelwa.
Kusungulwe njalo indawo lapho okuzabuthaniswa izibi emzini we Mabvuku/Tafara anduba umanisipala azezibutha, ekhangelelwe ukuba ibe isisebenza kusiyaphela wonalo umnyaka ka 2015. ebizwa ngokuthi yi Waste Management Centre.
Abaphatheke kwezokulondolozwa kwendawo zihlanzekile okungaphazamisi imvelo ama Environmentalist, bathi le izaba yindlela njalo yokutholisa uzulu inzuzo, zingehlukaniswa izibi lezi besezithengiselwa abamankampani abaphatheke kumisebenzi yokuphinda bayilungise kube yimpahla esetshenziswayo njalo i– recycling.